တစ် ဦး ချင်းစွမ်းအင်နှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာစောင့်ရှောက်မှုကို ၂၀၂၁၊ 25ပြီ ၂၅ ရက် – JucelinoLuz
တစ် ဦး ချင်းစွမ်းအင်နှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာစောင့်ရှောက်မှုကို ၂၀၂၁၊ 25ပြီ ၂၅ ရက်
Jucelino Nobrega da Luz သည် ၂၁ ရာစု၏ဘရာဇီးတွင်အကြီးမားဆုံးကုသသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
၅၁ နှစ်တာကာလအတွင်း၎င်းသည်ကုသမှုစွမ်းအားကိုရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူပေါင်း ၂ သန်းကျော်သည်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြိုဆိုခဲ့ကြသည်
သူ၏စောင့်ရှောက်မှုမှအကျိုးခံစားရသူများ၏ ၆၀% သည်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုပျော်ရွှင်စွာတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤအောင်မြင်မှုနှုန်းသည်ထူးခြားသည်!
အချိန်နှင့်အာကာသထက်ကျော်လွန်သောအနာဂါတ်တွင်ကုသသူနှင့်ခရီးသွားသူအနေဖြင့်သင်၏ဖြစ်လျက်ရှိ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စွမ်းအင်ပြည့်ဝမှုနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးအရသင်၏ဖြစ်တည်မှုကိုသဟဇာတဖြစ်စေရန်သူ့ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအလင်းနှင့်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှင့်သည်။
Jucelino da Luz ကိုတစ် ဦး ချင်းအစည်းအဝေးအတွက်ရှာပါ
ငါကုသမှုဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးရလဒ် 100% မှော်ပါ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !
Isabelle M က, Le Vésinet
Jucelino နှင့်ဤကုသမှုအတွက်သူ၏လမ်းညွှန်များကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤသူနှင့်အတူမွေးဖွားခြင်းသည်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အားဆင့်ကဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာရန်၊ အလင်း၏မျက်မြင်သက်သေတစ် ဦး ဖြစ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ Jucelino ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုသူရဲ့အကြံပြုချက်တွေပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တောက်ပ
Christel က S, Grenoble
Mr Jucelino ကိုဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂရုစိုက်မှုနဲ့ဒီရှင်းပြချက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏ကြင်နာမှုနှင့်ကြင်နာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင့်ကိုတွေ့ရသော ၀ မ်းသာမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊
การดูแลพลังงานและจิตวิญญาณส่วนบุคคลในระยะทาง 25 เมษายน 2564
পৃথক শক্তি এবং আধ্যাত্মিক যত্ন 25 এপ্রিল, 2021 এ দূরত্বে